Famotehana amin'ny akohokely sy karazana ratra hafa amin'ny biby fiompy: ahoana no hisorohana sy fitsaboana? - Poultry farming - 2019
Ny aretina vokatry ny sakafom-biby: Azo sitranina ny fery amin'ny akoho, saingy tsara kokoa ny misakana izany
Ny akoho, duck na goose tsirairay izay mipetraka ao amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana dia manana ny toetrany, manana ny toetrany manokana - mitovy amin'ny an'ny olombelona. Jereo ny vorona mandritra ny antsasak'adiny, ary ho hitanao fa manan-danja ny sasany amin'ireo vorona, ny hafa dia mihetsika haingana ary ny sasany dia matahotra.
Izany hoe, ao amin'ny tontolon'ny vorona ihany koa, dia manana ny cholerika, sanguine, phlegmatic ary mampihomehy.
Nahoana isika no nanomboka io resaka io? Ary ankoatra izany, ny fahasalaman'ny vorona dia miankina amin'ny fahalemena. Ary ankehitriny dia tsy momba ny aretina viriosy, fa momba ireo izay hitan'ny vorona eny an-dohany, mandinika ireo arabe akaiky akaiky kokoa ary mandeha an-tongotra malalaka eny amoron-dalana.
Rehefa manome fahalalàna fahalalahana ny tontolon'ny biby, dia tsy maintsy mahatsapa ny tantsaha tsirairay fa amin'ny fomba toy izany no anasitranany ny akoho sy gisadia ho an'ny loza mety hitranga.
Ny vorona iray dia afaka mahazo trauma amin'ny tenany (vokatry ny fipoahana na raha misy zavatra azony), na voaray taorian'ny fanafihana biby na biby an-trano.
Zava-doza noho ny ratra
Miala amin'ny taova sy ny ra
Ahoana no hikarakarana azy?
Mangirifiry mafy amin'ny akoho
Inona no loza?
Ny trangan-javatra any anaty fiompiana dia singa tokana ary tsy azo atao amin'ny herim-pamoretana iray manontolo, raha tsy manafika ny andiam-biby ny bibidia ary manavao azy io.
Fa ny fahavoazana ho an'ny vorona iray na maromaro avy amin'ny ratra dia mety ho manan-danja: hatramin'ny herinandro marin'ny fitsaboana sy ny fahasitranana, ny amputation ny rantsana sy ny fahasembanana mandritra ny androm-piainana.
Tsy ilaina ny milaza izany aorian'ny ratra dia tsy ho feno tanteraka ny olona toy izany? Ankoatr'izay, ny fahatokisana ny vorona dia tsy azo afenina amin'ny maotina - mety ho matanjaka loatra ny "akoho" na ny duck dia "hanadino tanteraka" ny adidiny amin'ny asany ary tsy hanana ny fahafahany miteraka na mametaka.
Ny antony lehibe indrindra amin'ny ratra amin'ny biby fiompy dia mety ho tsy mitandrina ny tompony, mamela ny biby fiompy handeha na aiza na aiza, ahoana ary rahoviana.
Ny tsy firaharahan'ny vorona ihany koa dia afaka manao azy ho toy ny tsy fahampian-tsakafo: fitifirana glas, sasantsasany tariby, zavatra hafa maranitra tsy vitan'ny hoe mahita ny vorona eny an-dàlana, fa koa miteraka fihenam-bidy lehibe na fatoriana lalina eo amin'ny paiso.
Ny elatry ny vorona dia mety maratra amin'ny fifandraisana eo amin'ny shtahetami. Raha fintinina dia mety hitranga avy amin'ny manga ny antony mahatonga ny ratra. Tsy sarotra ny manakana ny ratra amin'ny vorona an-trano, fa zatra amin'ny fahalalahana sasany.
Raha tsy azonao antoka ny fiarovana ireo biby fiompinao ivelan'ny tokotany, dia araho tsara kokoa ny fiarovana azy ireo tsy handeha eny an-tanimboly, eo amoron'ny renirano, na eny amin'ny bozaka ivelan'ny vavahady aza - hahatsiaro ho mendrika ianao, ary ny akohoo dia ho azo antoka kokoa.
Misy karazan'antatra marobe mahazatra indrindra amin'ny vorona, ny famaritana sy ny famantarana izay havoakantsika ato amin'ity fizarana ity.
Izy io dia manavaka ny vorona tena mavitrika, indrindra fa ny tanora, izay maniry mafy ny hianatra momba ny tontolo manodidina.
Ny akoho na ny duckling dia afaka mandona amin'ny zavatra rehetra: mikasika ny ampahany metaly amin'ny fitaovana fambolena, ny varavarana, ny fefy, ny hazo.
Ny fanenjehana ireo bibikely, ny akoho dia matetika atosiky ny hany ka tsy mahita hipoka tampoka eo anoloany izy ireo.
Raha tsikaritrareo fa ny segondra vitsy lasa izay, ny akoho mavitrika dia mitoetra ao anaty bozaka, na ny dian-tongotra, miala sasatra, na tsy afaka mamerina indray ny fanandramana handehanana ary tsy misy intsony ny tanjony, na lasa malaina sy tsy mavitrika - midika izany fa nijaly izy.
Ary, angamba, lozan-doha iray: manana an'io fahazaran-dratsiny io ny akoho kely, saingy tsy maninona, fa mamely mafy ny lohany.
Mety ho tratran'ny olon-dehibe iray ihany koa ny fery.
Ny fiterahana dia mety vokatry ny fifandonana amin'ny sakantsakana, fanongotra, fanafihan'ny mpihaza. Na, raha nisy vorona nanafika mafy.
Ny ankamaroan'ny olona, ​​dia voan'ny aretin-koditra ny vorona.Mahatsikaiky fa misy ny taolana avy amin'ny taolana.
Ny famoahana malalaka dia mora fantatra ary hita maso na amin'ny tsy manam-pahaizana manokana, na dia amin'ny maso tsy mitongilana aza. Sarotra kokoa ny mamantatra ny fifindrana mihidy, mety hikorontana amin'ny fialokalofana ny kofehy na ny kofehy.
Raha manidina elatra na tongotra ny vorona iray, dia asehoy avy hatrany avy eo amin'ny toeram-pivoahana na mitondra rétro.
Ny fiompiana biby dia mandray io karazana fampijaliana io tahaka izany - avy amin'ny fifandonana mahery vaika, fanafihana na vokatry ny fanafihana biby.
Ny ratra tahaka izany koa dia mety ho tratran'ny fractures. Rehefa tapaka sy ratra ny taova anatiny, dia lasa liana amin'ny sakafo sy eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ny vorona, lasa malahelo sy maharary.
Ny henan'aretina coccidiose - aretina iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny toeram-pambolena anao amin'ny fotoana rehetra!
Efa nandre ve ianao momba ny toetran-jazakely, nefa tsy manana fanazavana azo antoka? Ny fampahalalana ilaina rehetra dia eto.
Ny tranga tsirairay dia voan'ny aretina hafa. Raha voamarikao ny sakaizanao, ary noho izany, mba hahitana ny fitohanana na ny fifindra-monina, dia tokony hifandray amin'ny manam-pahaizana ao amin'ny toeram-pitsaboana ianao. Toy izany koa - amin'ny fandotoana anatiny.
Ankoatra ny famantarana ivelany ny ratra, ampiasaina ny rongony sy ny fanadinana.
Ary koa: ny karazana ratra rehetra dia mitaky fitsaboana hafa.
Raha misy lozam-pifamoivoizana kely, dia ampy handefa ilay ranomandry mankany amin'ny toerana maharikoriko ary hamela azy irery ao anaty efitrano maizina.
Saingy, mba tsy hisorohana ny fitsaboana sy ny fahafatesana amin'ny ati-doha, dia mila manontany amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny fotoana fohy ianao.
Ny fakana aina dia mitaky fitsabahana amin'ny fandidiana na fanelezana ny ratra iray.
Ny fandatsahana ny aty anatiny dia mety hijanona amin'ny fanomanana manokana, fa raha misy ihany ny fepetra ara-potoana amin'ny fitsaboana amin'ny dokotera.
Ny tena zava-dehibe amin'ny fitondrana ratra dia ny fahatanterahana.. Tokony hotsarovana fa ny vorona dia manana dingana metabolika haingana, ka noho izany fanasitranana dia mihelina lavitra noho ireo saka na alika.
Raha manomboka manasitrana ny ratra amin'ny vorona ianao ao anatin'ny roa andro voalohany, dia misy vintana tsara ho an'ny fahasitranana haingana.
Raha misy kofehy na ratra, dia mila manamboatra ny ratra nahazo azy amin'ny toerany ara-batana (tahaka ny teo aloha teo ilay ratra), niezaka ny tsy handefa ny fandefasana azy ary hametraka azy io mba tsy hivoatra ilay ampahany naratra.
Aorian'ity fepetra ity, afaka mifandray amin'ny toeram-pitsaboana ianao. Ao, ny biby fiompinao dia asiana fitsaboana ara-pahasalamana (toy ny fanafody antibiotika sy ny menaka dia ampiasaina amin'ny tranga tsy voamarina, ary antibiotika dia ampiasaina amin'ny tranga sarotra) ary hanolo-kevitra hampiditra vitaminina ilaina ao anatin'io sakafo io.
Ny fepetra iray hafa momba ny fitsaboana dia ny fiantohana ny fandriampahalemana ho an'ny vorona.
Raha tratran'ny lozam-bolo ny tompon'ilay toeram-pambolena dia lasa fomba fiasa tsara indrindra.
Ny tompona tsara dia mahafantatra ny toerana misy ny biby fiompiny ary ny toerana voarara tanteraka ho an'ny biby fiompy, raha mbola eo an-dalam-pandrosoana izy ireo, rehefa avy miala ao an-trano, hatraiza ny habetsaky ny biby mpiremby sy ny fomba mety hahatonga azy ireo ho lasa toeram-pivarotana.
Toy izany koa ny alika sy saka mpifanolo-bodirindrina, izay biby fiompinavona amin'ny alàlan'ny trano fonenana, fa ny natiora dia mbola bitika mpihaza ihany.
Mba hiarovana ny andian'ireo vorona amin'ny fandrahonana hita maso sy tsy hita maso - ity no asa lehibe indrindra amin'ny tompona. Izy io koa no fepetra fisorohana lehibe ho an'ny ratra amin'ny pelaka.
Mazava ho azy, rehefa naratra mafy izy, dia nahatsapa fanaintainana mahatsiravina ny akoho, toy ny zava-manan'aina rehetra.
Ny zavatra tokana izay mety hanaisotra ny kely mahantra ny valin'ny tsipìka, izay ny harena voajanahary no mivoatra noho ny loharanon'ny atidoha.
Izany dia manazava ny tranga mampihoron-koditra avy amin'ny akoholahy "mivelona", raha mbola mitohy manohy tsy tapaka izy rehefa tapaka ny lohany.
Na izany aza, ny fanaintainana dia fanaintainana, ny akoho dia mahatsapa tsara azy ary miezaka ny hiaro tena amin'ny hery rehetra ao amin'ny vatany. Rehefa nanipika ny herin'ny hery rehetra amin'ny fiarovana ny fiarovan-tena, mety hampihena ny fametrahana atody mandritra ny fotoana ny havokely, raha tsy izany, dia tsy mitsahatra ny mikarakara.
Rehefa avy niaina fanaintainana mafy izy ireo, dia nanomboka nikiakiaka mafy ireo akoho mandra-pisakafaka na, raha ny marina, dia mangina. Ny olona sasany, toy ny fiarovana fiarovana, dia misafidy ny lazaina hoe fomba fanetren-tena - mipetraha fotsiny, aza maneho na inona na inona.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny aretina vokatry ny sakafom-biby: Azo sitranina ny fery amin'ny akoho, saingy tsara kokoa ny misakana izany